Gaa n'okporo ụzọ Ebro | Akụkọ Njem
Ndị Ebro Ọ bụ osimiri kasị ukwuu na Spen ma na-agba gburugburu 928 kilomita Olee ihe enyemaka, na-asa ahụ obodo na mmiri na ubi na ya Ruth. N'isiokwu a anyị ga-eme njem pụrụ iche n'okporo ụzọ Ebro, na-ahụ obodo dị mkpa na nke kachasị dị mkpa nke ọ gafere.
Anyị na-amalite njem anyị n'ụzọ zuru ezu Ugwu Cantabrian, kpọmkwem na obodo ezumike nke Fontibre, na ụkwụ nke nnukwu Pico Tres Mares, nke dị mita 2.175. N'oge oyi, ugwu ndị a na-eri nri na osimiri na ice ha, ugwu ebe ị ga-ahụkwa Alto Campóo ezumike ebe nke nwere ikike kachasị elu nke 6.880 skiers kwa awa ma mejupụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke na-acha anụnụ anụnụ na nke asatọ na-acha uhie uhie, yana mpaghara 2,5-cross ski ski.
Ọ bụrụ na anyị gaa kilomita ise ọzọ, anyị gafere alaeze, obodo mepere emepe nke dị 75 kilomita site Santander. Na Reinosa, ụlọ ụka San Sebastián, nwere ihu ọma mara mma, na ebe obibi ndị mọnk nke San Francisco, yana facade Herrerian, kwesịrị nleta. Site na Reinosa anyị nwere ike ịgagharị na chọọchị nke San Martín de Elines (ihe dịka kilomita atọ) ma ọ bụ ruo na mkpọmkpọ ebe nke Julióbriga.
3 Ebe obibi ndị mọnk ahụ
Ebro na-agafekwa La Rioja. N'ebe a, ọ dị ka ókèala n'etiti obodo a na Basque Country na Navarra. N'iso ụzọ osimiri ahụ, nkwụsị mbụ anyị bụ na Haro, ndị «isi obodo mmanya», nnukwu obodo. N'ime ya ị ga - ahụ ụka nke Santo Tomás, nwere ezigbo ụlọ baroque. Basilica nke Nuestra Señora de la Vega na-echekwa onyonyo nke Virgin nke malitere na narị afọ nke XNUMX.
Halọ Nzukọ Obodo Haro sitere n'oge neoclassical, site na narị afọ nke 3 na gburugburu obodo anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụlọ mara mma. Ọ bụrụ n'ịchọrọ njem njem, site na Haro ị nwere ike ịme njem (ọ bụkwa site na igwe) gaa Briñas (9 km), Briones (11 kilomita) na Sajazarra na Casalarreina (ha abụọ dị kilomita XNUMX).
Ọzọ anyị gafere Logroño, mkpa Gbasara Camino de Santiago. N'ebe a, anyị nwere ike ịchọta ụlọ okpukpe dị mkpa na oge ochie: Chọọchị Santa María del Palacio, Chọọchị San Bartolomé, site na narị afọ nke XNUMX, na ụlọ elu Mudejar na Chọọchị Santiago el Real, ebe anyị nwere ike ịchọta ihe oyiyi nke Santiago n’elu ịnyịnya. Na ofka Santa María la Redonda, nke e wuru n’agbata narị afọ nke XNUMX na XNUMX, anyị ga-ahụ ihe osise nke ịkpọgide n’obe nke onye Italy ahụ na-ese ihe Michelangelo sere.
Na kilomita 50 site na isi obodo bụ Calahorra. N'ime obere obodo a bụ Calagurris Iulia n'oge ndị Rome, ọ nwere katidral nwere nnukwu ọrụ Ribera, Zurbarán na Tiziano na ndị ọzọ. Carventite convent na Chọọchị Santiago bụkwa ihe na-adọrọ mmasị.
Anyị na-aga ugbu a alfaro, otu n’ime obodo ndị kasị buo ibu na Spen. Obodo a ama ama karịa ihe niile n'ihi na Cid meriri ya na afọ 1073 ma mee otu n'ime nnukwu ugwu nke Late Middle Ages na ha: echiche dị n'etiti ndị eze Castilla, León, Aragon na Navarra.
Ozugbo anyị banyere osimiri Navarra, anyị kwụsịrị Tudela, nke dị kilomita 95 site na Pamplona. Site na ebe a, anyị nwere ike ịgagharị na ụkwụ na Bocal Real (5 km) nwere dams abụọ site na narị afọ nke XNUMX na XNUMX. Na Tudela anyị nwere ike ịga leta Episcopal Obí na ụka nke La Magdalena na San Nicolás, yana ọtụtụ ụlọ obí eze.
Anyị rutere Zaragoza, isi obodo na etiti akwara nke Aragon. N'ebe ahụ, saịtị / ebe / ụlọ ndị a kwesịrị:
Towerlọ Mmiri ahụ.
Aterlọ ihe nkiri nke aterlọ ihe nkiri.
Ebe ngosi ihe ngosi nke Forum.
Afọ Millennium nke Atọ.
Historylọ Akụkọ Ihe Mere Eme.
Ikwu maka Zaragoza bụ ikwu maka obodo dị ezigbo mkpa na Spain nke oge ochie na nke oge a jikọtara. N'ime ya ị nwere ike ịchọta ụlọ ụlọ akụkọ ihe mere eme na nke oge a na ihe iji mee ka ọ pụta ìhè bụ na ọ bụ otu n'ime obodo kachasị ọcha na Spain.
Ebe obibi ndị mọnk ahụ
N'etiti Calatayud na Zaragoza bụ Ebe obibi ndị mọnk nke Nkume, bụ ihe kwesịrị maka ịma mma ya. Ọ bụ Alfonso II nke Aragón guzobere ya na 1164, n'akụkụ Osimiri Piedra, ya mere aha ya. Ọ bụ nnukwu ebe obibi ndị mọnk nke Cistercian nke nwere mgbidi na ụlọ elu ya na square, ebe e nwere ọgba aghara na-eme ka mmiri na-asọba, si otú a na-esite na ya nsụda mmiri na ọdọ mmiri.
Ebe obibi ndị mọnk nke Nkume bụ ebe nlegharị anya nke ndị njem nleta na-anọchi anya obere ohia nke ahịhịa ndụ na mmiri na obodo ebe ọtụtụ afọ gara aga enwere oke ọkọchị.
Ọ bụrụ na-amasị gị egwuregwu ịkụ azụ, ị nwere ike ịme ya na Ebro osimiri ma ọ bụrụ na ị kpebie ime njem a na-esochi ya, na mgbakwunye na ịtụgharị uche maka ala ndị mara mma na ụlọ ndị anyị chịkọtara ebe a. Na-anwa anwa ime njem a na-adọrọ mmasị na nke ọdịnala?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Gaa n'okporo ụzọ Ebro